Google ရဲ့ Pixel 4a ကိုမပြခင်မှာပေါက်ကြားသွားပြီ Androidsis
Google ၏ Pixel 4a ကိုမထုတ်ဖော်မီအပြည့်အဝပေါက်ကြားခဲ့သည်
DaniPlay | | မိုဘိုင်း
COVID-2020 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် Google I / O 19 ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းသည် Mountain View သည်၎င်း၏နောက်ထပ်ဖုန်းနှစ်လုံးကိုမပြသနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် Pixel 4a၊ အလယ်အလတ်အကွာအဝေး terminal ဖြစ်သည် Pixel5၏တင်ပြချက်မတိုင်မီရောက်ရှိလိမ့်မည်.
ဘေး pixel 4a ယခုရောက်ရှိလာမည့်ပိုမိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာရှိသောစမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုထည့်သွင်းရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည် pixel 4a XL၎င်း၏ပုံသဏ္allာန်အားလုံးကိုမပြမီပုံတစ်ပုံကိုမြင်နိုင်သည်။ စတုတ္ထမြောက် ပထမ ဦး ဆုံးဓါတ်ပုံတွေမှာပြသခဲ့သည်တွင် ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေး၏စပိန်အတွက်ဗီဒီယို, ဖြစ်နိုင်တဲ့စျေးနှုန်း နှင့်လည်းကြောင်း UFS 2.1 သိုလှောင်မှုရှိလိမ့်မည်.
Pixel 4a ၏အင်္ဂါရပ်များ
အထူးသဖြင့်အနောက်ဘက်တွင်ကင်မရာတစ်လုံးပါ ၀ င်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး 9to5Google ကဖော်ပြသည်မှာ 12,2 MP အာရုံခံကိရိယာနှင့် optical stabilization နှင့် 4K video တို့ကို 30 FPS တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဂူးဂဲလ်သည် AI မှ bokeh ပါ ၀ င်သော software တွင်တိုးတက်မှုများကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။
မျက်နှာပြင်၏ရွေးချယ်မှုအားဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သည် ၅.၈၁ လက်မအရွယ်ရှိ OLED အမျိုးအစား Full HD + resolution (2.340 x 1.080 px)၊ 19: 5:9အချိုးအစားနှင့် selfie ကင်မရာအတွက်ဘယ်ဘက်တွင်ဖောက်ထားခြင်းဖြင့် notch ကိုအစားထိုးသည်။ Google ရှေ့မျက်နှာပြင်အတွက်ရွေးချယ်လိုက်သည့်အာရုံခံသည် ၈၄ ဒီဂရီရှိသော 8 megapixels များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါပရိုဆက်ဆာ Snapdragon7စီးရီးဖြစ်လိမ့်မည်, ဤကိစ္စတွင်ရွေးချယ်ထားသော Snapdragon 720 ဖြစ်သည် 2,2 GHz အမြန်နှုန်းရှိသည့် Core ရှစ်ခု၊ RAM6GB နှင့်သိုလှောင်မှု 64 GB သည် MicroSD slot မပါဘဲနှင့်အတူ။ အထက်ဖော်ပြပါဘက်ထရီသည်အမြန်အားသွင်းသည့် 3.080W ရှိပြီး ၃၀၈၀ mAh ရှိပြီးတစ်နေ့တာလုံးအသုံးပြုရန်အတွက်လုံလောက်သည်။
El Google Pixel 4a တွင် Titan M လုံခြုံရေးချစ်ပ်ထည့်သွင်းမည်ထို့အပြင်စမတ်ဖုန်းသည် Android 10 စက်ရုံတွင် Google developer များဖြန့်ချိမည့်နောက်ထပ်ဗားရှင်းများနှင့်အတူအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
ပုံ - @Onleaks ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Google ၏ Pixel 4a ကိုမထုတ်ဖော်မီအပြည့်အဝပေါက်ကြားခဲ့သည်
COVID-19 ကို Apple နှင့် Google ပူးပေါင်း
Oppo A12 သည် Bluetooth အသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပြသည်